Usoro Nkuzi 2 JUNIPER Onye ọ bụla na-achọ ịmụrụ ihe | Ọ BỤ
Usoro Nkuzi 2 JUNIPER Onye ọ bụla na-achọ ịmụrụ ihe
Juniper na-eme ọganihu ndị na-eme ka ndị na-akpakọrịta nwee ike ịdị na ntanetị, na-elekọta nsogbu, na ịmepụta ụzọ.
Juniper na-enyekwa ndị mmadụ aka ịkọrọ echiche ha n'ozuzu ha na ndụ ndụ n'ime ọhụụ ha. Usoro a bụ ebe ndị ọhụrụ na ndị mmadụ na-ezute, ihe ndị na-esi na ya pụta pụkwara ịdị ịtụnanya.
Usoro ọmụmụ Ọzụzụ JUNIPER Onye ọ bụla n'ime ụlọ ọrụ ahụ chọrọ ịmụta
JUNIPER Training Courses & Certification are like Followers
Otu ndi otu maka JUNIPER JNCIS -SEC
Ihe dị mkpa maka JUNIPER JNCIS -SEC
Mgbalị JUNIPER JNCIA - JUNOS
Utu ndi isi maka JUNIPER JNCIA - JUNOS
Ihe dị mkpa maka JUNIPER JNCIA - JUNOS
Dị ka otu nzukọ, isi ihe mgbaru ọsọ Juniper bụ ilebara ihe niile anya na ime mmadụ niile. Dịka azụmahịa, Juniper na-agbalị ka ndị mmadụ na-emepụta mkpakọrịta dị mkpa nke na-eme ka ọrụ ha dị iche iche, kweta nkwenye, na jikọọ na ìgwè ndị ọzọ dị ịrịba ama na-enwe mmetụta dị mma na ndụ mmadụ n'otu n'otu.
Ndị JNCIS-SEC ma ọ bụ Juniper Networks Specialist Special - Nche nche na-ezube inye ala ikike na usoro nche, nhazi na nyocha na nnukwu azụmahịa ọnọdụ. A na-eme atụmatụ a maka ndị ọkachamara nchịkọta usoro na ahụmịhe na n'etiti mmụta ụzọ nke mmemme Junos maka ngwaọrụ SRX.
Kwenye na nduzi na nchekwa na usoro na-eme ugbu a na ịntanetị.
Nye ihe osise nke Ngwaọrụ SRX na mmemme mmemme.
Dọbaa mmiri na-agbanwe agbanwe na ntinye nke nnọkọ nke ngwaọrụ SRX.
Dọpụta, ndokwa, na ebe nchekwa.
Dowe, ndokwa, na nchedo nchedo.
Dọpụta, ndokwa, na ihuenyo njikwa nkwado ahịa ahịa.
Kọọ ụdị ụdị usoro ihe mgbochi.
Nhazi na ihuenyo ndị ọzọ iji chebe ndokwa agha.
Kọwaa, gbuo, na ihuenyo NAT, dị ka actualized na Junos nche nkebi.
Kọwaa ihe kpatara ya na usoro ntanetị nke IP Security (IPsec) arụmọrụ nke onwe (VPNs).
Mmegbu na nhazi nhazi nke dabeere na nke dabeere na IPsec VPNs.
Jiri ma nweta nkwalite data nchekwa IDP.
Nhazi na IDP ihuenyo na usoro usoro.
Ntinye, ndokwa, na ihuenyo dị elu nke nwere ike ịmepụta ihe.
Nchọpụta Ntanetị ọhụrụ na-enye JNCIS Ọzụzụ na 9 iche iche India - Bangalore, Chennai, Delhi, Gurgaon, Hyderabad, Kolkata, Mumbai, Noida na Pune.
Usoro a na-abara ndị nchịkwa nke Ngwaọrụ SRX. Ndị ọchịchị a na-ejikọta ndị injinia, ndị isi ụlọ, ndị na-akwado ndị ọrụ, na ndị ọrụ ụlọ ọrụ na-akwado ọrụ.
Ndị nyocha nwere ike ịnwe ihe nlekọta nchịkọta usoro nchịkwa na ịghọta ngosipụta Ntugharị Njikọ Systems (OSI) na mgbakọ TCP / IP. Ndị nchịkwa kwesịrị ịga n'otu aka ahụ na Ntuziaka nke usoro Ịntanetị nke Junos (IJOS) na Ọkpụkpụ na-emegharị ihe dị mkpa (JRE), ma ọ bụ nwee ahụmahụ dị oke tupu ịga na klas a.
JNCIA - Ọzụzụ Junos site na Ngwọta Ọhụrụ Ngwọta bụ nyocha nke ngalaba nke na-agagharị dị ka ntọala maka ọmụmụ ihe ndị na-egbukepụ na Junos. Juniper Networks CertifiedAssociate na-egosi na onye ọkachamara ikike na-arụ ọrụ na Junos os, mgbanwe, steering na usoro usoro nlekọta isi. Nweta ohere ịchọta banyere akụkụ ndị dị mkpa nke mmemme Junos site na igosi na nyocha ụlọ ọrụ. Zụlite nkà na nhazi na nchịkwa nke Junos OS na arụmọrụ ya.
Mee ihe dị iche iche na nhazi CLI na ụdị ọrụ
Weghachite ngwaọrụ Junos na nhazi ụlọ ọrụ ha
Kpọpụta na ilekọta ndokwa
Mee nhọpụta maka mkpado osisi, nhazi nhazi, SNMP na NTP
Dezie ndokwa ọrụ
Dezie ma na-arụ ọrụ RPF na-ekpuchi (Ntugharị Ụzọ Na-aga n'ihu)
Na-eduzi nlekọta ncheta ma na-edekọ usoro nkwado nke Ngwa Ngwaọrụ Junos
Overhaul os os os irè
Lezie anya na-arụ ọrụ, nhazi steeti, OSPF na usoro nchịkwa
Dezie ihe ntanetị firewall
Nchọpụta Ntanetị Nyocha na-enye JNCIA Ọzụzụ na mpaghara 9 dị iche iche na India - Bangalore, Chennai, Delhi, Gurgaon, Hyderabad, Kolkata, Mumbai, Noida na Pune.
Nke a Junos zuru oke maka ndị na-agba ọsọ ma ọ bụ ndị ọkachamara nlekọta usoro nke chọrọ ịmalite nghọta ha na Junos os, Juniper Netwọk dị mkpa ma na-eduzi echiche.
Maka nke ọ bụla n'ime atọ nke Junos Tracks n'okpuru, JNCIA-Junos bụ ihe dị mkpa mkpa atọ atọ egwu egwu:
Òtù ndị ọkachamara Nhazi na Ntugharị: Usoro a bụ maka ndị na-arụ ọrụ na ntọala ma ọ bụ nweta ndokwa na Netiper Networks na-eduzi yana ịgbanwe ọnọdụ njedebe na njedebe n'ime ụlọ ọrụ mgbasaozi mgbasa ozi ma ọ bụ gburugburu Fortune 100 Enterprise environment.
Ịmalite Ijegharị na Ntugharị: Usoro a bụ maka ndị na-arụ ọrụ na obere ụlọ ahịa Enterprise ọnọdụ nke na-ewebata ma na-akwado Juniper Networks ọhụrụ nke usoro usoro nke LAN na WAN gbanwere wee gbanwee.
Nchebe Junos: A na-ejikọta usoro a maka ndị na-akọwapụta na actualize Juniper Networks secure systems.